yarzartun: October 2014
Best Android Root Tools from PC
အကောင်းဆုံးနဲ့ နာမည် အကြီးဆုံး Root tools တွေကို စုစည်းပေးလိုက်ပါတယ် .. တစ်ခုမဟုတ် တစ်ခုနဲ့Root ဖောက်လို့ ရအောင် ပါ .. ကျွန်တော်ကတော့ BootLoader Unlock လုပ်စရာမလို OneClick နဲ့ Root ပေါက်နေတာ တော်တော်ကြာပါပြီ .. :D
Click n Root.exe
Posted by dawallay lay at 11:49:00 PM No comments:
Posted by dawallay lay at 10:11:00 PM No comments:
Posted by dawallay lay at 9:17:00 PM No comments:
Posted by dawallay lay at 8:12:00 AM No comments:
ဘောလုံးဂိမ်းကြီး ကြိုက်သူ များအတွက် FIFA 14 PC game ^^nosTEAM^^ (6.33 Gb)
7:06 PM PC Game3comments
ကဲ..ဘောလုံဂိမ်း ကြိုက်သူများအတွက် တကယ့်ဘောလုံးဂိမ်းကြီး တခုဖြစ်တဲ့ EA Sport FIFA
PC Game ကိုတင်ပေးလိုက်ပါပြီ။တင်ပေးမယ်လို့ရည်ရွယ်ခဲ့တာ ကြာပါပြီ။အကြောင်းကြောင်းကြောင့်
ဒီဂိမ်းက အင်တာနက်မလိုဘဲ (Offline) ကစားရတဲ့ ဂိမ်းတခုပါ။အသင်းပေါင်းများစွာ၊အားကစားသမား
ပေါင်းများစွာပါဝင်ပါတယ်။ဒီဂိမ်းကို အင်စတော မလုပ်ခင် အောက်မှာဖေါ်ပြထားတဲ့ PC System
Requirements ကို သေချာဖတ်ပါ။ပြီးမှ အင်စတောလုပ်ပါ။
ဖိုင်ဆိုဒ် အရမ်းကြီးတဲ့ အတွက် RAR ဖိုင် (၁၁)ဖိုင်ခွဲပြီး တင်ထားပေးပါတယ်။တဖိုင်ချင်း၊တပိုင်းချင်း
စီကို သေချာ ဒေါင်းလုပ်ယူပါ။
-အပိုင်း (၁၁) ပိုင်းကို ပြန် Extarct လုပ်လိုက်ရင်...
FIFA 14 nosTEAM.part1.exe နဲ့
FIFA 14 nosTEAM.part2.rar ဆိုပြီး ဖိုင်(၂) ဖိုင်ဘဲ ရပါမယ်။
-FIFA 14 nosTEAM.part1.exe တခုထည်းကိုသာ အင်စတောလုပ်ပါ။
-FIFA 14 nosTEAM.part2.rar ကိုဘာမှ လုပ်စရာမလိုပါ။part1 ကို အင်စတောတာနဲ့ Auto Extarct
and Install လုပ်ပေးသွားပါလိမ့်မယ်။
-အင်စတော ကြာချိန်မှာ ၂-နာရီနဲ့ အထက်ကြာနိုင်ပါတယ်။
Posted by dawallay lay at 8:31:00 PM No comments:
8:42 AM Android game No comments
တစ်ကမ္ဘာလုံးကအနှစ်ခြိုက်ဆုံးအားကစား(ဘော်လုံးကန်) တဲ့ဂိမ်းအမျိုးအစားလေးပါအားလုံးလည်းနှစ်ခြိုက် ကြမယ် လို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ အခုကျွှန်တော်တင်ပေးထားတဲ့ apk+data လေးလည်းပါတယ်။ EA Sports ရဲ့နံမည်ကြီးဂိမ်းအမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။အခုဗားရှင်းအသစ်မှာတော့ Features တွေအတော်လေးစုံ လင်လာ တာတွေ့ရပါတယ်။ရုပ်ထွက်ကလည်းအရမ်းကောင်းမွန်ပါတယ်။
Pes 2014 ကစားချင်သူများအတွက် ပါ
3:17 PM Android game No comments
ကျနော်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။အောက်ကလင့်မှာဒေါင်းလော့ယူနိုင်ပါတယ်။ဖုန်းဘားရှင်3းနဲ့အ ထက်တွေ မှာ ထည့်သွင်းကစားနိုင်ပါတယ်။ Data ဖိုင်ထည့်နည်းကိုတော့မပြောတော့ပါဘူးနော်။
Posted by dawallay lay at 7:13:00 AM No comments:
Window genuine ပြဿနာကို ဖြေရှင်းရန် Window Genuine Remover
နာက်ခံပုံပြောင်းမရတော့တာ ရက်၃၀ပဲခံတော့မယ် ။ စကရင် အောက်ခြေမှာလဲ
This copy window genuine ဆိုတာပေါ်တယ် ။အဲ့လိုဖြစ်ရင် ဒီဆော့ဝဲလေးထည့်
ဒီဆော့ဝဲလေးကတော့ Window Update ကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ Genuine ကို ရှင်းဖို့ 
အရမ်းကောင်းမွန်ပီး Window Loader ထက် အန္တရာယ်ကင်းပါတယ် ။ ဒီဟာလေး
ကိုဆောင်ထားပါ ။ ဖြစ်လာပြီဆိုရင် အောက်မှာပေးထားတဲ့ အဆင့်အတိုင်း လုပ်
Anti- Virus -အင်တာနက်လိုင်းကို ပိတ်ထားလိုက်ပါ
ဆော့ဝဲကို Run လိုက်ပီး Remove WAT ကို နှိပ်ပါ
ခဏစောင့်ပါ ပီးရင် Restart ချမလားမေးတဲ့အခါ OK နှိပ်ရင် ရပါပီ
DownloadLink 1 - Window Genuine Remover 2.2
Download Link2- Window Genuine Remover 2.2
မူရင်းလင့် - http://www.anzaq.com
လုပ်နည်းမသိရင် အောက်ကဗီဒီယိုကြည့်လုပ်ပါ -
Windows Phone 8.1, 8, 7.5,7များတွင် မြန်မာ Font ထည့်သွင်းနည်း
6:15 PM Windows Phone မြန်မာ Font No comments
Posted by dawallay lay at 9:35:00 PM No comments:
Windows Update ပိတ်ရအောင်
ဒါကတော့ Windows Update ပိတ်ချင်သူများအတွက် သွားပိတ်ရမယ့်နေရာလေးတွေကို ပြပေးလိုက်တာပါ..။ ဘာကြောင့် Windows Update လုပ်တာလဲ..။ ဘာကြောင့် Windows Update မလုပ်တာလဲ ဆိုတာကို ရှင်းပြမနေတော့ပါဘူး..။ အခုဒီနည်းက ကွန်ပျူတာ ရောင်းတဲ့ဆိုင်တွေမှာ စက်ဝယ်တဲ့အခါ Original Windows မပါရင်၊ သူတို့ ဖာသာ Windows တင်ပေးတတ်ပါတယ်..။ (Windows တင်ပေးတဲ့အတွက် သူတို့ကို ဝင်းဒိုးတင်ခ သီးသန့် ပိုက်ဆံထပ်ပေးရပါတယ်..။) အဲလိုအခါမျိုးကျရင် Windows Update မတက်အောင် အခုကျနော်ပြတဲ့ နည်းလေးတွေနဲ့ ပိတ်ပေးလိုက်ကြပါတယ်..။ နောက်တခုက Windows တင်တင်ချင်းမှာလဲ Update မတက်အောင် ပိတ်ခဲ့ရတဲ့ နေရာတခုရှိပါတယ်..။
ထုံးစံအတိုင်း နံပါတ်စဉ်တိုင်း နှိပ်သွားပေးလိုက်ပါ...
အောက်ကပုံမှာပါတဲ့ အမှန်ခြစ်လေးတွေကို ဖြုတ်ပေးလိုက်ပါ..။
7 နဲ့ 8 နေရာတွေကို ပြောင်းပေးပြီးရင် OK နှိပ်လိုက်ပါ..
ပြီးရင်တော့ အောက်ကပုံမှာ ပြထားတဲ့အတိုင်း Control Panel Home ကိုပြန်သွားလိုက်ပါ..။
Action Center ကို ကလစ်ပြီး ဝင်ပါ..
အောက်ကပုံမှာ မြင်နေရတဲ့ အမှန်ခြစ်များအားလုံး ဖြုတ်ပေးလိုက်ပါ..။
Change Action Center Setting ကနေ သွားပြန်ဝင်ကြည့်ရင်တော့ အောက်ကပုံအတိုင်း မြင်ရမှာပါ..။
Posted by dawallay lay at 9:37:00 PM No comments:
Block Annoying advertisements with AD Block Plus
အောက်က webpage ကို တစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပါ။
Free Service ပေးတာနဲ့အညီ Page တစ်ခုလုံးကို ကြော်ညာတွေ မြင်မကောင်းအောင် ထည့်ထားပါတယ်။ ကြော်ညာ တွေများတော့ ဘာဖြစ်လဲ? (၁) မျက်စိနောက်တယ် ဒါက နည်းနည်း သည်းခံလို့ရသေးတယ်။ (၂) ကြော်ညာတွေကို loading လုပ်နေရလို့ Bandwidth တွေ စားပြီး connection တွေကျတယ်.. ဒါကတော့ ရှိစုမဲ့စု ကွန်နက်ရှင် သမား တွေကို တိုက်ရိုက်ထိခိုက် သွားပါပြီ။ Connection နှေးအောင် လုပ်တဲ့လူက ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ရန်သူပါပဲ ။ ဒီတော့ စိတ်ညစ်စရာ ကြော်ညာတွေကို ဖျောက်ထားလို့ မရဘူးလား?? သိပ်ရတာပေါ့.. Firefox Addon AD Block Plus ကို သုံးလိုက်လေ။
၁။ ဒီကို ၀င်ပြီး AD Block Plus Addon ကို Install လုပ်ပါ။ ( Install ပြီးရင် FF ကို restart ချပေးရမယ် )
၂။ Restart ချပြီး Firefox ပြန်တက်လာရင် AD List တစ်ခုကို Subscribe ရပါတယ်။ ပုံမှာ ပြထားတဲ့အတိုင်း “EasyList(USA)” ကိုပဲ ရွေးပေးလိုက်ပါ။
၃။ ပြီးရင်တော့ ခုနက ကြော်ညာတွေ သိပ်များပါတယ်ဆိုတဲ့ site တွေကို ပြန်ဝင်ကြည့်လိုက်ပါ။ ကြော်ညာတွေ အကုန်လုံး ပျောက်နေတာ တွေ့ရပါမယ်။
၄။ Browser ရဲ့ အဆင်ပြေတဲ့ တစ်နေရာမှာ AD Block Plus button နေရာယူထားတာတွေ့ရပါမယ်။ အဲဒီ Button ကို နှိပ်ပြီး Page တစ်ခုခြင်းစီအလိုက် Disable လုပ်တာ၊ Domain တစ်ခုလုံး Disable လုပ်တာနဲ့ AD Block ကို Enable/Disable လုပ်တာတွေ လုပ်လို့ရပါတယ်။
၅။ Subscribe လုပ်ထားတဲ့ List ထဲမှာ မပါတဲ့ ကြော်ညာတွေကိုတွေ့ရင်လည်း အဲဒီအပေါ်မှာ Right Click ပြီးတော့ “AD Block Image” “Ad Block iFrame” ရွေးပြီး List ထဲကို ထပ်ထည့်လို့ရပါတယ်။ နောက်ဘယ်တော့မှ ကြော်ညာတွေအတွက် စိတ်ညစ်ခံစရာ မလိုတော့ပါဘူး။ Firefox နဲ့ Ad Block ရှိနေပါပြီ။
IE ကို ပိုကောင်းအောင် လုပ်ပေးတဲ့ IE Pro
Check Bagan’s Proxies with MultiProxy!
Firefox Right Click Context Menu Editor
Blog အတွက် Domain အသစ်ယူရအောင်
Proxy တွေကို အလွယ်တကူ ပြောင်းလို့ရတဲ့ Switch Proxy
Posted by dawallay lay at 12:07:00 AM No comments:
Facebook Comment တွေကို Animation လေးတွေနဲ့မန့်မယ်ဗျာ ...
မန့်နည်းလေးကတော့ လွယ်လွယ်လေးပါ ... ကျွန်တော်ပေးတဲ့ Link တွေကို copy ကူးပြီး comment box မှာ past လုပ်ပေးလိုက်ရင် ရပါပြီ ... အိုခေ ... မသိသေးတဲ့သူတွေအတွက် မျှဝေလိုက်ပါတယ် ...။
( ပုံထဲကအရုပ်လေး )
( ချစ်သူစုံတွဲ )
( အသဲပုံလေးနဲ့ နှင်းဆီပန်းပွင့် )
( ချစ်စရာခွေးလေးနှစ်ကောင် )
( ခွေးကလေးကိုအ၀တ်တန်းမှာချိတ်ဆွဲထားတဲ့ပုံ )
( ဟောင်နေတဲ့ခွေးလေး )
( ကျွမ်းထိုးနေတဲ့ ၀က်ဝံလေး )
( မျက်စိမှိတ်ပြနေတဲ့ မစ်ကီမောက်ခ် )
( ဂစ်တာတီးနေတဲ့အရုပ်လေး )
( ကနေတဲ့ကြောင်လေး )
( ပါးချနေတဲ့ ပိုကီမွန် )
( စကိတ်စီး )
( ကနေတဲ့ကောင်မလေး )
( ငါးမန်း )
( သီချင်းနားထောင်နေတဲ့ကြောင်လေး )
( ကီးဘုတ်ကိုခေါင်းနဲ့ တိုက် )
( အရိုးခြောက် )
( အကြင်နာမြေခွေး )
( မျက်နှာပြောင်တဲ့ယုန် )
( Star War ထဲကဂြိုလ်သား )
( ရေစီးနေတဲ့ စမ်းချောင်းလေး )
( မျက်တောင်ခတ်နေတဲ့ခွေးလေး )
( နတ်သမီး )
( လက်နဲ့ အသဲပုံလုပ်ပြမယ် )
( အရုပ်လေးကို ချစ်တဲ့ ဂါဂါး )
( တင်းနေပီနော် )
( ဖိုက်မယ် )
( လျှာသပ်နေတဲ့ခွေးလေး )
( ယီးလေးခိုပီးဆော့ )
( ကနေတဲ့ကြွက်လေး )
( အိပ်ပီ )
( အလစ်သုတ် )
( ဘွား!!! လန့်သွားတာပဲ )
( ရေသူမလေး )
( မြန်မာပြည် ကွန်နရှင် Loading..... )
( ဖြူကောင် Kiss )
( သဘောကျနေတဲ့ မစ်ကီမောက် )
( မိုးရေထဲက ခွေးလေး )
( စနိုးဝှိုက်မင်းသမီးလေး )
( မင်းသမီးလေးနဲ့ ငှက်ကလေး )
( မင်းသမီးလေးနဲ့ လိပ်ပြာလေး )
( မိုးရွာနေတယ် )
( နှိုးစက်နာရီ )
( ကြိုးခုန်နေတဲ့ လျှပ်စစ်တာဝါတိုင် )
( အအေးသောက်နေတဲ့စုံတွဲ )
( ကနေတဲ့ကိတ်မုန့် လေးတွေ )
( I Like That - ဂျိုကာ )
( ပြေးနေတဲ့မြင်း )
Zeshan Tariq's photo.
Posted by dawallay lay at 7:03:00 AM No comments:
Windows Vista/7/8 (32-Bit) Drivers Pack (844 Mb)
10:44 AM Drivers 1 comment
Windows Vista,7,8 (System 32-Bit) အတွက် Drivers Pack ကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။Windows
အသစ်တင်လိုက်တိုင်း Drivers တွေ မပြည့်စုံလိုအခက်အခဲ ဖြစ်နေသူတွေအတွက် အဆင်ပြေစေရန်
နဲ့ ဒေါင်းလုပ်ယူတဲ့အခါလဲ လွယ်ကူစေရန် မူရင်း 7-zip အတိုင်း တဖိုင်ထဲ တင်ထားပေးပါတယ်။
-7-zip ဖိုင်ကို Folder အသစ်တခု ဖွင့်လိုက်ပြီး ၎င်း Folder ထဲသို့ WinRAR ဖြင့် Extract လုပ်ပါ။
Extract ကြာချိန်မှာ အနဲဆုံး နာရီဝက်ခန့် ကြာပါမယ်။
-Extract လုပ်ပြီးဖိုင်ဆိုဒ်က 4.29 Gb ရှိပါတယ်။
-Extract လုပ်ပြီး ဖိုင်များထဲမှ dpinst.exe ဖိုင်ကို အင်စတောလုပ်ပါ။
Only Windows Vista/7/8 (32-Bit)
Posted by dawallay lay at 12:04:00 AM No comments:
Windows9Professional x64 + Freeware Sys (30 Days Trail Version)- (5.07 Gb)
8:32 PM Windows95 comments
CBox ကရော Email ကပါ မကြာခဏ တောင်းဆိုနေကြတဲ့ Windows9Professional ကို
ကိုတင်ပေးလိုက်ပါပြီ။အခုတင်ပေးလိုက်တာက 64-Bit System ကွန်ပြူတာများအတွက်ပါ။
32-Bit အတွက်တော့ယူနေကျ Pro Sites များမှာမထွက်သေးလို့ မတင်ပေးနိုင်သေးပါ။
အခု Version က 30-Days Trail Version ဖြစ်ပါတယ်။
Activate လုပ်ချင်ရင်တော့ ဝင်းဒိုးတင်ပြီး Microsoft Store မှာ Microsoft Account
(Hotmail) ဖြင့်ဝင်ရောက်ပြီး Product Key ကို တောင်းယူပါ။
Product Key ရရင် ရက်ပေါင်း(၁၈၀) သုံးနိုင်ပြီး ရက်ကုန်တာနဲ့ Renew ပြန်လုပ်နိုင်ပါတယ်။
Posted by dawallay lay at 11:45:00 PM No comments: